बुटवल जेसीजका अध्यक्ष तिवारी भन्छन- युवाहरुले चिन्ता होईन चिन्तन गरौ‌ - Lumbini Times
बुटवल जेसीजका अध्यक्ष तिवारी भन्छन- युवाहरुले चिन्ता होईन चिन्तन गरौ‌
2,175 views | लुम्बिनी टाइम्स | मंगलबार, ८ फागुन ।
बुटवल । जेसिज अभियान १८ देखि ४० वर्षका युवाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा विकास गराउने एउटा विश्वव्यापी सञ्जाल हो । यही विश्वव्यापी सञ्जालको एक अशं हो–बुटवल जेसीज । जसको स्थापना सन् १९७४ मा भएको हो । बुटवल जेसीजले युवाहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विशेषगरी जेसीजले व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामुदायीक र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा युवाहरुलाइ नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय बनाउने योजनाका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्ने गर्दछ ।
नेपाल जेसीजको सक्रिय सदस्य शाखाको रूपमा स्थापित भै सकेको बुटवल जेसीजले सुगममा मात्र होईन दुरदराजमा पनि यसका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ १८ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूलाई यकत्रित गर्न सधै लागिपरेको छ । परिणामत बुटवल जेसीजले सन १९८८ मा बाग्लुङ जेसीजको स्थापना गरेको थियो  । यसै गरी महिलाहरूलाइ पनि जेसीजको अभियानमा सक्रिय बनाई उनीहरूमा पनि नेतृत्व र व्यक्त्विको विकास गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भएर सन १९९६ मा बुटवल महिला जेसीजको स्थापना गरेको थियो  । यसै गरी वर्ष २००० मा नवलपरासीको रामग्राम जेसीज, वर्ष २००३ मा रूपन्देहीको भलवारी जेसीज, वर्ष २०१५ मा सैनामै ना र देवदह जेसीजको स्थापना गरी जेसीज अभियानलाई मुर्तरूप दिएको थियो  । बुटवल जेसीजको ४४ वर्षको इतिहासमा यसले ४३ जना अध्यक्ष पाईसकेको छ ।
बुटवल जेसीज वर्ष–२०१८ को नेतृत्व जेसी यम प्रसाद तिवारीले सम्हाल्नु भएको छ । पेशाले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स बुटवल शाखाको शाखा प्रबन्धक तथा प्रदेश नम्वर पाँचको संयोजक रहनु भएका तिवारीले यो वर्ष जेसीज अभियानलाई अत्यन्त प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने बताउनु हुन्छ । बुटवल जेसीज सन् २०१८ ले अन्तरशाखा फुटसल प्रतियोगीता यहि फागुन ११ र १२ गते सम्पन्न गर्दै छ । फुटसल प्रतियोगी किन र बुटवल जेसीजले यो वर्ष युवाहरुमा प्रभाव पर्ने के कार्यक्रम गर्दै छ ? यिनै सन्दर्भमा रहेर हामीले बुटवल जेसीज २०१८ का अध्यक्ष जेसी यम प्रसाद तिवारीसंग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।
बुटवल जेसीजले फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको कारण के हो ?
बुटवल जेसीज यस क्षेत्रको पुरानो संस्था हो । रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा जेसीजका धेरै शाखाहरु छन् । कतिपय शाखाहरु बुटवल जेसीजले मातृत्व प्रदान गरेका शाखा हुन् । अहिले हिजो जस्तो समय छैन । मेरो मान्यता छ– हामी आत्मनिर्भर भएर मात्र हुदैन एक अर्कामा अन्तरनिर्भर पनि हुनु पर्छ । यो वर्षको मेरो मुख्य प्रकरण नै TEAM अर्थात Together Everyone Achieves More रहेको छ । यसकारण हाम्रा छिमेकी शाखाहरुसंगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन यो प्रतियोगीता आयोजना गरिएको हो । खेलले हामीलाई जोड्ने मात्र होइन स्वस्थ र अनुशासीत हुन समेत सन्देश प्रवाह गर्दछ । यसका महत्वपुर्ण पक्षहरु धेरै छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यो खेलले हाम्रो सम्बन्धलाई थप उचाईमा लैजान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपाल जेसीजले जसरी यो वर्ष बुहुशाखा तालिमको अवधारणालाई अघि सारेको छ । यो प्रतियोगीताले त्यो अवधारणालाई सार्थक बनाउन पनि यस क्षेत्रका शाखाहरुलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास हो । यो प्रतियोगीताबाट नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न लागिएको हो ।
आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने भनेर आयोजना गरिएका प्रतियोगीताहरु विवादित भएको पनि देखिन्छ यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
तपाईले भनेको कुरा मैले पनि कहिलेकाँही सुन्दै आएको छु । हाम्रो त्यस्तो विवाद हुदैन किनकी जेसीजका युवाहरुलाई जेसीजको आस्थाले बाँधेको छ । जेसीज आस्थामा उल्लेख छ – कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरुको प्रभुसत्तादेखि सर्वेपरिछ.. । यसैले पनि बन्धुत्वको भावना र अनुशानको सिमा भन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौं । म तपाईलाई प्रष्ट रुपमा बताउँ छु यो प्रतियोगीता जित र हारको लागि आयोजना गरिएको होईन । मैले विभिन्न शाखाका अध्यक्षज्यूहरुसंग पनि परामर्श गरेको छु । खेलमा संस्थापक अध्यक्ष, सल्लाहकार, वर्तमान अध्यक्ष, पदाधिकारी र जेसीज मनहरुको सहभागिता हुन्छ । यसकारण पनि खेल रोचक हुने हाम्रो अनुमान रहेको छ । अर्को कुरा बुटवल जेसीजले यो प्रतियोगीता आयोजनाको नेतृत्व गरेपनि यसलाई सफल बनाउन विभिन्न शाखाका अध्यक्षज्यूहरुले महत्वपुर्ण सुझाव सल्लाह दिई रहनु भएको छ । बुटवल जेसीज २०१८ का विशिष्ट सल्लाहकार, सल्लाहकार, निवर्तमान अध्यक्ष र पुर्व अध्यक्षज्यूहरुसंगको सल्लाह र संरक्षकत्वमा नै यो प्रतियोगीता आयोजना गरिएको हो ।
मैत्रीपुर्ण प्रतियोगीता मात्र हो की पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ ?
हेर्नुस यो मैत्रीपुर्ण प्रतियोगीता नै हो । तर हामी प्रतियोगीताको नियम भन्दा बाहीर जान सक्दैनौ । प्रतियोगीतालाई सभ्य र मर्यादित बनाउन बुटवल जेसीजका सल्लाहकार तथा पुर्व अध्यक्ष जेसीआई सिनेटर दिनेश श्रेष्ठले कमाण्ड सम्हाल्नु भएको छ । प्रतियोगीताको संयोजक जेसी अमृत पाण्डे र सदस्यमा जेसीज मित्रहरु रहनु भएको छ । हामीले प्रथम,द्धित्तिय र तृतिय हुने शाखालाई कप तथा प्रमाण पत्रको ब्यवस्था गरेका छौं । म छिमेकी शाखाका अध्यक्षज्यूहरुलाई प्रतियोगीतामा सहभागिताको लागि यस क्षेत्रकै लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका लुम्बिनी टाईम्स मार्फत पनि अनुरोध गर्दछु ।
अब तपाईको कार्यकाल बारे कुरा गरौ‌ । भनिन्छ जेसीज तालिम केन्द्र हो, तपाईले कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त यो वर्ष ?
निकै महत्वपुण प्रश्न गर्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद । यो वर्ष बुटवल जेसीजले गर्ने कार्यक्रम घोषण भईसकेको छ । युवाहरुको नेतृत्व र ब्यक्तित्व विकासको लागि मैले विशेष तालिमहरु गर्ने योजना बनाएको छु । तालिम केवल कार्यक्रमकोलागि गरेर हुदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यसैले यो वर्ष सञ्चालन हुने तालिमबाट जेसीज र ननजेसीज युवाहरुको जीवनमा आमुल परिवर्तन आउने गरि कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । तालिमका माध्यमबाट नेतृत्व र ब्यक्तित्वलाई प्रभावशाली बनाएर मात्र हुदैन युवाहरु सक्रिय नागरिकको रुपमा समाजमा अघिवढ्नु पर्छ । यसैले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न रु १ कार्यक्रम घोषणा गरेको छु । रु १ कार्यक्रम मार्फत सन् २०१८ भित्र बुटवल जेसीजले यस क्षेत्रको कुनै विद्यालय वा गाँउ,टोलमा एउटा पुस्कालय स्थापना गर्ने छ । यसको लागि एक दिन मा रु १ बचत गर्न जेसीज सदस्यहरुले सुरु गरि सक्नु भएको पनि छ ।
बुटवल जेसीजले पब्लिक स्पिकर बुटवललाई २०१८ मा कसरी अगाडी बढाउँ छ ?
पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१८ लाई धेरै भन्दा धेरै युवाहरुको माझमा लैजाने मेरो योजना रहेको छ । यो कार्यक्रम भित्र सञ्चालन हुने तालिमहरु यसका मेरुदण्ड हुन । हामीले ननजेसीज साथीहरुलाई यहि कार्यक्रम मार्फत तालिमहरु सञ्चालन गर्दछौं । पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१८ भित्र बुटवल जेसीजको इतिहासमै पहिलो पटक फरक र प्रभावकारी रुपमा तालिम सञ्चालनको लागि तयारी गर्न केही साथीहरुलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छु । हामीसंग अत्यन्त राम्रा प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसलाई कस्तो मोडलमा लैजाने अन्तिम खाका तयार पार्दै हुनुहुन्छ । पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१८ को बारेमा अहिले म धेरै कुरा खोल्न चाहान्न । अर्को कुरा युवाहरुको ब्यवशायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो वर्ष नौलो किसिमको तालिम सञ्चालन हुने कुरा अवगत गराउन चाहान्छु । त्यसै गरी एक युवा नेतृत्वमा कुशल, पेशा र ब्यवशायमा सफल भएर मात्र हुदैन । यो आधुनिक शैलीको जीवन यापनमा हामीले स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । सवै कुरा छ तर स्वास्थ्य ठिक छैन भने जति राम्रो तालिम लिए पनि उसले सक्रिय नागरिकको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैन यसैले यो वर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धि एक वृहत कार्यक्रमको सोचं बनाएको छु ।
यि त तालिमका कुरा भए अन्य योजना के छन् ?
अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको बुटवल जेसीजको आफ्नै भवन छ, यसलाई मर्मत सम्भार गर्न, आधुनिक तालिम हलको निमार्ण गर्न बोर्ड अफ ट्रस्टिजसंगको समन्वयमा अघि बढ्ने छु । यो वर्ष भरी जेसीज अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पुर्व अध्यक्षज्यूहरुको सल्लाह र सुझाव नै मेरोलागि मार्गदर्शन रहनेकुरा अवगत गराउन चाहान्छु । विधिको शासन स्थापनाकोलागि रेडियो कार्यक्रम जेसीज आवाज मार्फत र प्रतक्ष्य कार्यक्रम मार्फत सरोकारवाला निकायलाई झकझकाउन मेरो टिम सक्रिय रहने छ ।
यो वर्ष कार्यक्रमहरु धेरै छन । कतिपय साथीहरुले कसरि सम्भव होला भनेर चिन्ता पनि प्रकट गर्नहुन्छ । तर मैले साथीलाई अनुरोध गरेको छु कि चिन्ता होईन चिन्तन गरौं सफल अवस्य भइन्छ । किनकी बुटवल जेसीजसंग गौरवमय इतिहास छ । अनुभवले खारिएका हाम्रा पुर्व अध्यक्षज्यूहरु साथमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सल्लाह र साथले नै हरेक चुनौतीलाई पार गर्दै जेसीज अभियानलाई बलियो गरि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विस्वास हो ।